Ụbọchị My Pet » Erikwa Sensations
Ịhọrọ otu pụtara na ị na-ahụ maka na gị onwe gị obi ụtọ & otú i nwere ikike impersonate Santa Claus na Ista ewi na nweta onwe gị ihe ị chọrọ maka ụbọchị ọmụmụ ugbu. Naanị gị maara ihe n'ezie na-eme ka ị na-nne Mmetụta na afọ ojuju. Taa kpọrọ ka ọ bụrụ àgwà indulge random omume nke ịchọ ọdịmma onwe onye. Gbalịa na ya & ị ga-hụrụ ya n'anya!
Erikwa sensashion #3
Fa la la la luscious! Were olu ihe. Ọ ga-mma gị na-ekwu okwu n'olu na-enye gị ọhụrụ onwe-obi ike oge ọ bụla ị na-emeghe ọnụ gị.
Erikwa sensashion #10
Ultra-fabulous n'ụlọ-akwụkwọ. Nọrọ n'ụlọ a onwe ọzọ na a ọbịa siri nri si na mpaghara gị mmasị ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Ma ọ bụ na Salsa nkụzi si obodo agba egwú studio tinye zest gị ọzọ themed nzukọ. Ị” nwere oké fun amụta na aghụghọ ha ahia.
Erikwa sensashion #28
Gold Rush. Zụrụ onwe gị ihe ịrịba mpempe j-e-w-e-l-r-y. Ọ bụghị ejiji, ezigbo ihe. Get ụfọdụ karats ka dakọtara gị sachaa àgwà. Mee ya ka ọ pụrụ iche site na-enwe nri ehihie ahụ na mbụ gaa zụọ ahịa maka nnukwu bauble. Were oge gị agụụ ihe ọjọọ mgbe ọtụtụ iberibe tupu buru 'onye.’
Erikwa sensashion #31
Bollywood nwa ọhụrụ. Malite n'afọ egwú. Osisi mmegharị, anụ music, na sexy ekike – Olee ihe ọzọ ị chọrọ ke otu ihe omumu? M hụrụ tọn ozi na klas na ekike nakwa dị ka mmụọ nsọ maka ịlụ malitere na www.shira.net na www.bellydancingvideos.com.
Erikwa sensashion #55
-Enwe mma Ihe ná Ndụ. Kwa mgbe na awhile ibuli gị uto larịị. Splurge na a oké kalama mmanya. Ịlele na caviar na a Gọọmet deli. Ịtụ na cheese efere na ihe upscale ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Ndụ na-luxe ndụ.
Erikwa sensashion #74
N'Ebe maka izu ụka. Gbanwee otú njedebe nke afọ ara ma ọ bụ atụmatụ a izu ụka pụọ ​​n'oge ọ bụla nke afọ. Get a map ma na-abịaru a abụọ-hour mbanye oge okirikiri na a abụọ-hour ikuku oge okirikiri. Mkpọ a akpa ma na-eleta a abụghị-na-n'ebe dị anya spa, na-akpali ha gbara agbata obi obodo, ụlọ ahịa na ebe, ma ọ bụ mara mma osimiri. Mmadụ Bịa na afọ n'ihu na a izu ụka pụọ.
Erikwa sensashion #90
Ndụ n'Anya. Na-oge kwa ụbọchị iji na-eme otu ihe ị hụrụ n'anya. Ọ nwere ike na-nghọta na ndị enyi, na-agụ oké akwụkwọ, ma ọ bụ nri elu a oké ifufe. Ihe dị mkpa bụ na-emeghe obi gị na ndị mmadụ na ihe ị hụrụ n'anya.